မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: စင်္ကာပူတွင် … ခေတ္တ … ဗေဒင်ဟောပြောမည်
စင်္ကာပူ တွင် ခေတ္တ ဗေဒင် ဟောဆိုမည်။
2012 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 25 ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ 23 ရက်နေ့ အတွင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ခေတ္တဗေဒင်ဟောပြောမှု ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် နာမည်စစ်ဆေးပေးမည် ဖြစ်ပြီး၊ မိမိတို့မှည့်ခေါ်သုံးစွဲနေသော အမည်များအလိုက် … တစ်သက်တာတွင် ရရှိနိုင်သော အကျိုးအပြစ် နှင့် ဆောင်အပ်/ရှောင်အပ်သည်များကို တိကျစွာ လမ်းညွှန်ဟောဆိုပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဥာဏ်ပူဇော်ခ လူတစ်ဦးချင်းဆီအတွက် SGD 30$ သတ်မှတ်ထားပါသည်။
မိမိတို့ နာမည်၏ အကျိုးအပြစ် ကို တွက်ချက်စစ်ဆေးလိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ပါ စင်္ကာပူလိပ်စာ နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တွင် တင်ကြို စာရင်းပေးသွင်း ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ လူတွေ့ စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး …၊ အမှန်တစ်ကယ် နာမည်မှ ပေးနိုင်သော ကောင်းကျိုး နှင့် ဆိုးကျိုးများ ၊ အားသာချက်နှင့် အားနဲချက်များကို တွက်ချက်စစ်ဆေးပေးပါသည်။ နာမည်အားနဲသူများ အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သော သဘာဝ ယတြာများကို လမ်းညွှန်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ (ယတြာခ ဟူပြီး မရှိ)။
မေးမြန်းလိုသူများ အနေနှင့် … နာမည်နှင့် လူမျိုး/ဘာသာ စသည်တို့ကို တင်ကြိုပေးပို့ပြီး လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး လိုသည့်အချိန် ကိုလည်း ယခုပိုစ့်တင်သည့်အချိန်မှ စတင်ပြီး၊ အပွိုင့်မန့်တင်ကြို အမှာထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်စုံစမ်း ….စာရင်းပေးသွင်းရမည့် လိပ်စာ နှင့် ဖုန်းနံပါတ်
No. Block 40
Phone; 8266 6632
စင်္ကာပူတွင် ရက်မြန် နာမည်ဟောနည်း စနစ်ကို ပို့ချပေးပါမည်။
( သင်တန်းမဟုတ်ပါ။ သင်တန်းကြေးမရှိပါ။)
နာမည်ကိုသိရုံဖြင့် …လူတို့၏ စရိုက်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားကို အကဲခတ်နိုင်ရန် ….
မိမိနှင့် ဆက်ဆံရမည့် သူများ၊ လုပ်ငန်းဖော်၊ မိတ်ဆွေ၊ ရန်သူ ၊ အထက်အကြီးအကဲ ၊ အောက်လက်ငယ်သား …၊ ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက် ..စသည်ဖြင့် အားလုံးသော သူများကို နာမည်အရ …မည်သို့ မည်ပုံ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်မည် ဟူသည်ကို တင်ကြို အကဲခတ်ထောက်လှမ်းနိုင်သော ..ပညာရပ် တို့ကို လေ့လာနိုင်စေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။
နာမည်အရ ……. ရောက်ဆဲ ခုနှစ်အလိုက် ကံဇာတာ တွက်စစ်နည်း ….
နာမည်အရ …… တစ်သက်တာ ကံအကျိုးပေး တွက်စစ်နည်း ….. နှစ်မျိုးကိုလည်း လာရောက်လေ့လာ ဆည်းပူးနိုင်ပါသည်။
အလားတူပင် …. မဟာဘုတ်၊ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ၊ ဒသာဟောနည်း ..အစရှိသည်တို့ကိုလည်း အချိန်ရနိုင်ပါက ..လေ့လာလိုသူများအတွက် နည်းပြလမ်းညွှန်ပေးပါမည်။ လူတွေ့သင်ကြားပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ အွန်လိုင်းမှ သင်ကြားပေးခြင်း၊ သင်တန်းမူများ ပေးပို့ခြင်း ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
အချိန်တိုအတွင်း နားလည်လွယ် ၊ သဘောပေါက်လွယ် ၊ လက်တွေ့အသုံးချလွယ်စေရန် ကြိုးစားစီစဉ်ပေးထားသည်။ ဗေဒင်ပညာနှင့် လုံးဝ စိမ်းနေသူများအတွက်လည်း နားလည်လွယ်ပြီး ၊ လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်စေရန် …ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေပြီး ဗေဒင်ပညာကို လေ့လာလိုက်စားရာတွင် အခက်အခဲရှိနေသူများ ၊ လွယ်ကူစွာ စိတ်ဖြင့် တွက်ပြီး …လက်တွေ့အသုံးချလိုသူများ …၊ ဘ၀အောင်မြင်ရေး အ၀၀ တွင် …ဗေဒင်ပညာကို လက်တွေ့တပ်အပ် အသုံးပြုလိုသူများ ၊ မိသားစုအတွင်း တိုးပွားလာသော အနာဂတ်မျိုးဆက်ကလေး များကို …ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ နာမည်ပေးမမှားအောင် စောင့်ရှောက်လိုသူများ အတွက် ရည်ရွယ် ကူညီပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်ယူလိုသူများ အနေနှင့်လည်း တင်ကြို စာရင်းပေးသွင်းထားရပါမည်။
နေထိုင်မည့်အချိန်ကာလ နှင့် အခြားကဏ္ဍများအရ …. လိုအပ်ပါက လူဦးရေ ကန့်သတ်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ အမှန်တစ်ကယ် စိတ်ပါဝင်စားစွာ သင်ယူလိုသူများ တင်ကြိုစာရင်း ပေးသွင်းထားပါ။
သင်တန်းချိန် ၊ သင်တန်းကာလ ..စသည်တို့ကို မသတ်မှတ်ထားသေးပါ။ ရက်မြန်မြန်နှင့် လိုရင်းကို တိုက်ရိုက်သင်ကြားနည်းပြ ပေးမည်သာ ဖြစ်သည်။ သင်ယူလိုသူ အများစု၏ ဆန္ဒ နှင့် အားလပ်ချိန်များ ပေါ် မူတည်ပြီး အချိန်ပေး သင်ကြားလမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စား သူများ အနေနှင့် အောက်ပါ လိပ်စာ နှင့် ဖုံးနံပါတ်တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းခြင်း၊ စာရင်းတင်ကြိုပေးသွင်းခြင်း ပြုနိုင်သည်။